I-Fibromyalgia | Iseluleko - Imbangela - Izimpawu - Ukwelashwa - Exercise & Exercise
<< Ukuphindaphinda komzimba
I-Fibromyalgia yisimo sezokwelapha esibonakaliswa ubuhlungu obungapheliyo, obudlangile kanye nokwanda kokuzwa kwengcindezi esikhunjeni nasiswini. I-Fibromyalgia yisimo esisebenza kakhulu. Kujwayelekile futhi ukuthi umuntu ahlaselwe ukukhathala, izinkinga zokulala nezinkinga zememori.
Izimpawu zingahluka kakhulu, kepha izimpawu zokuphawulwa zibuhlungu obukhulu nobuhlungu obuvuthayo emisipha, okunamathiselwe emisipha nasekuzungezeni amalunga. Ihlukaniswa njengoyedwa ukuphazamiseka kwemithambo ethambile.
Imbangela ye-fibromyalgia ayikaziwa, kepha ucwaningo lwakamuva luveze ukuthi kungahle kube yi-epigenetics kanye nohlobo olubangela ukungasebenzi kahle ebuchosheni. Kulinganiselwa ukuthi abaningi ababalelwa ku-100000 noma ngaphezulu bathinteka yi-fibromyalgia eNorway - ngokusho kwezibalo ezivela eNorway Fibromyalgia Association.
Futhi skrolela phansi esihlokweni se ukubuka ividiyo yokuqeqesha iguqulwe kuleyo ene-fibromyalgia.
Ukugxila okuningi kufanele kubekwe ocwaningweni oluhlose isimo esithinta abaningi kakhulu - yingakho sikukhuthaza ukuthi wabelane ngale ndatshana kwezokuxhumana, mhlawumbe ngekhasi lethu le-Facebook bese uthi: "Yebo ocwaningweni olwengeziwe nge-fibromyalgia". Ngale ndlela umuntu angenza ukuthi 'isifo esingabonakali' sibonakale kakhudlwana.
Funda futhi: - 6 Ukuzivocavoca kwalabo abane-Fibromyalgia
Uthinteka Kanjani? Joyina iqembu le-Facebook «I-Rheumatism - INorway: Ucwaningo nezindaba»Okokuvuselelwa kwakamuva ocwaningweni nasekubhaleni abezindaba ngale nkinga. Lapha, amalungu angathola usizo nokusekelwa - ngazo zonke izikhathi zosuku - ngokushintshana nakho kwabo siqu nezeluleko.
I-Fibromyalgia - incazelo
I-Fibromyalgia ivela eLatin. Lapho i-'fibro 'ingahunyushwa ngezicubu zemicu (izicubu ezihlanganayo) kanye ne-'myalgia' ingahunyushwa ngobuhlungu bemisipha. Incazelo ye-fibromyalgia iba-ke 'kubuhlungu kwezicubu zomzimba nezicubu'.
Ngubani othintwa yi-fibromyalgia?
I-Fibromyalgia ivame kakhulu ukuthinta abesifazane. Kukhona isilinganiso esingu-7: 1 phakathi kwabesifazane nabesilisa abathintekile - okusho ukuthi abesifazane abaphindwe kasikhombisa bathinteka njengabesilisa.
Yini ebangela i-fibromyalgia?
Okwamanje awuyazi imbangela eqondile ye-fibromyalgia, kepha unezinombolo eziningi zemibono nezimbangela ezingaba khona.
Ufuzo / epigenetics: Ucwaningo lunikeze ubufakazi bokuthi i-fibromyalgia ivame ukuphikelela emindenini / emindenini futhi kuye kwabonwa nokuthi amathonya angaphandle anjengokuxineka, usizi nokutheleleka kungaholela ekuxilongeni kwe-fibromyalgia.
- Ingabe impendulo ye-fibromyalgia iyimfihlakalo ezakhiweni zethu zofuzo?
Ukulimala / ukulimala / ukutheleleka: Kuvele ukuthi i-fibromyalgia ingahle ibe nokuhlobana kuma-traumas athile noma ukuxilongwa. Ubuhlungu bethambo, i-Arnold-Chiari, i-cervical stenosis, i-larynx, i-mycoplasma, i-lupus, i-virus ye-Epstein Barr kanye nokutheleleka kwezifo zokuphefumula konke kukhonjiwe njengezimbangela ze-fibromyalgia.
Funda futhi: - I-Fibromyalgia Ingase Ibangelwe Ukuxubana Ebuchosheni
Yiziphi izimpawu ezejwayelekile ze-fibromyalgia?
Ubuhlungu obukhulu nezimpawu zomlingiswa njengokuqina kwemisipha, ukukhathala / ukukhathala, ukulala kabi, ukungabi namandla, isiyezi, ikhanda nokuqaqamba kwesisu.
Njengoba kushiwo, kubuye kwaba nemibiko yokuthi abantu abathinteka yi-fibromyalgia bavame ukuba nezinkinga zokukhumbula, ukuqina kwemilenze okungazwakali, ukuzwakala komsindo nokukhanya, kanye nezimpawu ezithile zemizwa. Ukuxilongwa kwesinye isikhathi kuhlotshaniswa nokudangala, ukukhathazeka kanye ne-post-traumatic stress syndrome.
Kukhonjwa kanjani i-fibromyalgia?
Phambilini, lesi sifo satholakala ngokuhlola amaphuzu ayi-18 emzimbeni, kodwa le ndlela yokuxilongwa manje isilahliwe. Ngokwesisekelo sokuthi akukho ukuhlolwa okuqondile kokuxilonga, kuvame kusekelwe ekubekweni kwezinye ukuhlonza futhi kususelwa kwizimpawu / izimpawu zomtholampilo.
Ukuxilonga ezindaweni ezibucayi emzimbeni?
Ucwaningo lwakamuva, olushicilelwe ku-Journal of Clinical Rheumatology (Katz et al, 2007), luyayilahla inkolelo yamaphuzu abuhlungu njengenqubo yokuxilonga, njengoba baphetha ngokuthi abantu abaningi nabo baba nobuhlungu kula maphuzu. Kukholakala nokuthi ukuhumusha abaningi ngokungafanele Ubuhlungu obukhulu be-myofascial njenge-fibromyalgia.
Ukwelashwa kwe-fibromyalgia kuyinkimbinkimbi kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi lesi simo siyahlukahluka kakhulu phakathi kwabantu futhi sihlala sihlotshaniswa nezinye izimo eziningi. Ukwelashwa kungaqukatha imishanguzo, ukuguqulwa kwendlela yokuphila, ukwelashwa ngokomzimba kanye nokwelashwa kwengqondo - imvamisa kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene.
Abanye abantu babona ukuphuculwa kwezimpawu zabo ze-fibromyalgia ngokwenza izinguquko ekudleni kwabo. Lokhu kungafaka ukugwema, ngokwesibonelo, utshwala, imikhiqizo yobisi kanye / noma i-gluten.
Kuyazuzisa kakhulu kumuntu ohlushwa i-fibromyalgia futhi athole usizo lokuthola ukuthi yikuphi ukuzivivinya okufanele kakhulu. Umelaphi ngokwenyama futhi angaphatha izilonda eziqinile, eziqinile.
I-Chiropractic kanye nokwelashwa okuhlanganyelwe
Ukwelashwa okuhlangene nokwenyama kungavuselela imisipha nobuhlungu obuhlangene. I-chiropractor yesimanje iphatha izicubu kanye namajoyinti, futhi futhi, njengokuxhumana okuyinhloko, ingasiza nganoma yikuphi ukudluliselwa noma okufanayo.
Umphumela ofakazelwe ngokulinganayo kwizimpawu ze-fibromyalgia. Umphumela uba mncane uma kusetshenziswa kuphela ukwelashwa kwengqondo kukodwa, kepha ngomphumela omkhulu uma kuhlanganiswa nezinye izindlela zokwelapha.
Ukuzivocavoca nokwelashwa ngokomzimba
Ukusebenza kwemisipha nokuthambisa umzimba kungaba nemiphumela yokunciphisa izimpawu emisipha eqinile nebuhlungu. Kwandisa ukujikeleza kwegazi ezindaweni zemisipha ezibandayo futhi kuncibilike kube yimicu eqinile yemisipha - kungasiza futhi ekususeni amabhithi nokunye okunjalo.
Ukwelashwa ngenaliti / i-acupuncture
Ukwelashwa nge-acupuncture kanye nenaliti kukhombisile imiphumela emihle ekwelashweni nasezinhlungwini ngenxa ye-fibromyalgia.
Indlela efanele yokuphefumula futhi ukuphefumula umzimba Okunganciphisa ukucindezeleka nokukhathazeka kungasiza ekudambiseni izimpawu.
Ukuzivocavoca / ukuzivocavoca kwalabo abane-fibromyalgia
Ukuzivocavoca okuguquliwe nokuzivocavoca umzimba kungathuthukisa isimo somuntu somuntu nokulala kwakhe. Kuhlangene futhi nokuncipha kobuhlungu nokukhathala. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuqeqeshwa kwenhliziyo nokuzivocavoca umzimba ikakhulukazi zibonakala ziphumelela kakhulu kulabo abathinteka yi-fibromyalgia. Ngezansi isibonelo sohlelo lokuqeqeshwa:
Lapha ubona izivivinyo ezinhle zokunyakaza ezinhlanu eziguqulelwa kulabo abane-fibromyalgia. Lokhu kungakusiza ekunciphiseni ubuhlungu bemisipha kanye nokuqina kwamalunga. Chofoza ngezansi ukuze ubabone.
Joyina umndeni wethu bese ubhalisa esiteshini sethu (chofoza lapha) - bese ulandela ikhasi lethu ku-FB ukuthola izeluleko zansuku zonke, zamahhala zezempilo nezinhlelo zokuzivocavoca ezingakusiza uthole impilo engcono kakhulu.
Amanzi afudumele / ukuqeqeshwa echibini
Ukuqeqeshwa kwamanzi ashisayo / echibini kukhombisile ukuthi kungasebenza kakhulu uma kuziwa ekukhululekeni kwezimpawu nokwenza ngcono ukusebenza - lokhu ikakhulukazi ngoba kuhlanganisa ukuqeqeshwa kwe-cardio nokuqeqeshwa kokumelana.
Funda futhi: - 3 Ukuzivocavoca Okujulile Kokuphefumula Okucindezelayo
Ngingayigcina kanjani i-fibromyalgia e-bay?
- Phila uphilile futhi uzivocavoce njalo (ngokuya ngemikhawulo yakho)
- Funa inhlala-kahle futhi uvikele ukucindezelwa empilweni yansuku zonke
- Hlala usesimweni esihle somzimba nge izinhlelo zokuzivumelanisa nezimo zalabo abane-fibromyalgia
- I-LDN (Umthamo ophansi i-naltroxen)
Lesi sithombe sihlanganiswa yi-CureToonse futhi sibonisa ukubuka konke kwezokwelapha kanye nokusebenza kwazo okubikiwe ekwelapheni i-fibromyalgia. Njengoba sibona, izikolo ze-LDN ziphezulu kakhulu.
Funda kabanzi: Izindlela ezi-7 ze-LDN ezingasiza Ngokuphikisana neFibromyalgia
Nakulokhu, sifuna buza kahle ukuthi wabelane ngale ndatshana kwezokuxhumana noma ngebhulogi yakho (sicela uxhumanise ngqo ne-athikili). Ukuqonda kanye nokugxila okwandisiwe kuyizinyathelo zokuqala zokuya empilweni yansuku zonke kulabo abathinteka kobuhlungu obungapheliyo, i-rheumatism ne-fibromyalgia.
Nakhu ukuthi ungasiza kanjani ukulwa nobuhlungu obungapheli futhi ubuxhase:
Inketho A: Yabelana ngokuqondile ku-FB - Kopisha ikheli lewebhusayithi bese uyinamathisela ekhasini lakho le-facebook noma iqembu le-facebook elifanele oyilungu lalo. Noma, cindezela inkinobho "yokwabelana" engezansi ukuze wabelane ngokuthunyelwe ku-facebook yakho.
Thinta lokhu ukuze wabelane ngokuqhubekayo. Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu osiza ukukhuthaza ukuqonda okwandayo kwe-fibromyalgia nokuxilongwa kwezifo ezingamahlalakhona!
Inketho B: Xhumanisa ngqo ne-athikili kubhulogi yakho noma kuwebhusayithi.
Inketho C: Landela futhi ulingane Ikhasi lethu le-Facebook
IPHEPHA LOKUQALA: - Lawa ma-18 Sore Muscle Points Angakutshela Uma Unayo I-Fibromyalgia
Chofoza ngaphezulu ukuze uqhubeke ekhasini elilandelayo.
URobert S. Katz, MD, noJoel A. Block, MD. I-Fibromyalgia: Ukuvuselelwa Kwezinqubo Nokuphathwa. Ijenali ye-Clinical Rheumatology: Umqulu 13 (2) Ephreli 2007pp 102-109
Izithombe: Creative Commons 2.0, Wikimedia, WikiFoundry
Imibuzo ebuzwa njalo ngeFibromyalgia:
Zizwe ukhululekile ukusebenzisa ibhokisi lokuphawula elingezansi uma unemibuzo noma imibono.
(Sizama ukuphendula yonke imilayezo nemibuzo kungakapheli amahora angama-24-48. Singakusiza futhi uhumushe izimpendulo ze-MRI nokunye okunjalo. Ngaphandle kwalokho, zizwe ukhululekile ukumema abangani nomndeni ukuthi bathande ikhasi lethu le-Facebook - elibuyekezwa njalo ngezeluleko ezinhle zezempilo, izivivinyo nezincazelo zokuxilongwa.)
Ukhona yini oke wacwaninga ukuthi kungani abesifazane abaningi abakhulelwe bethi izimpawu zeFibromyalgia zicishe ziphele lapho bekhulelwe kanye nesikhathi lapho ibele ngokuphelele? Ngingathanda ukuba nezinyanga ezi-5 ngikhulelwe unyaka wonke ..?
Nami ngabhekana nalokhu ngesikhathi ngikhulelwe. Ngingathanda ukukhulelwa unomphela ☺️
Sawubona Elsa. Impendulo ephuzile kancane, kodwa i-hormone thina besifazane esiyikhiqizayo ngesikhathi sokukhulelwa ikhulula ubuhlungu. Ngaya ku-hcg hormone eminyakeni embalwa edlule futhi ngathola ukukhululeka kobuhlungu nokwandisa amandla. Kwamanye amazwe, ucwaningo lwenziwe nge-hcg njengendlela yokulungisa ubuhlungu, kodwa lokhu akuyona into esetshenziswa eNorway.
Sawubona hlupha nge-fibromyalgia, i-metabolism ephansi kanye ne-endometriosis, ingabe kukhona ukuxhumana phakathi kwalokhu okuthathu? Ngine-prolapse emhlane ongezansi, ngithole ngemuva nje kokukhipha i-tailbone. Ngizabalaze iminyaka eminingi nge-lumbago futhi ngizwa sengathi ukuzivocavoca kucishe kungenze ngikhathazeke njengoba ngibuhlungu ngemuva kwalokho.
Izithombe zikaMnuz ezithathwe eminyakeni eminingi edlule bezikhombisa ukuguga ezihlakaleni nasezinqulwini. Udokotela wami we-chiropractor kanye ne-acupuncturist yami baye behlisa ijubane izikhathi eziningi kangangokuthi basola ukuthi ngine-hernia, kodwa akuzange kube nomthelela ekuhlolweni engangikuthatha eminyakeni embalwa edlule - ucabanga ukuthi yini engingayifuna ekuhlolweni? Kunzima ukujabulela ukuphila ngobuhlungu obunjalo bansuku zonke.
Kufika ku-30% walabo abane-metabolism ephansi nabo batholakala bene-fibromyalgia - ngakho-ke kukhona ukuxhumana okuthile, kodwa lokhu kuxhumana akukakaqondwa kahle okwamanje.
1) Ubhala ukuthi ukhiphe umsila?! Usho ukuthini?
2) Uthole nini i-low back prolapse? Ingabe ihoxisiwe kusukela ekuqaleni?
3) Uke wazama ukuqeqeshwa ngokwezifiso? Ukuthi kubuhlungu imisipha kuwuphawu nje lokuthi izicubu aziqinile ngokwanele ukuthwala umthwalo - bese kuthi lapho usukuma futhi uhambe empilweni yansuku zonke, nawe uthole izinhlungu ngenxa yalokhu (kuhlanganise ne-lumbago). Okuwukuphela kwendlela yokugwema ubuhlungu obuphansi emuva ukuthi izicubu ezisekelayo zinamandla kunomthwalo - ngakho-ke lapha udinga ukuthola izindlela zokuzivocavoca eziguquliwe ukuze ube namandla kancane kancane. Qala ngomfutho ophansi futhi uqonde phezulu. Cishe kuzothatha izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuthi ukwazi ukuzakha ufike ezingeni elihle ngokwanele.
Sicela ubhale izimpendulo zakho. Ngiyabonga kusengaphambili.
U-Ellen-Marie Holgersen uthi:
Ingabe ucwaningo lwabantu abane-fibromyalgia luyasebenza nakubantu abane-syndrome yobuhlungu bemisipha engapheli? Bese ngiqonde ucwaningo olukhombisa amaphutha okuhlanganisa ebuchosheni ebuhlungu obubangelwa izinzwa ezigulini ze-fibromyalgia.
U-Ellen Marie Holgersen
Lolu cwaningo alusho lutho ngalo - ngakho-ke ngeshwa asazi.
Sawubona ngihlangane nalokhu manje. Nginombuzo okhathaza abaningi. Kungani sikhohlwa izinto… inkumbulo yesikhashana .. baningi abanenkinga nayo. Kungani sikhohlwa amagama? kungani singahlolwa ebuchosheni noma ngemuva? Kufanele ikhonjiswe ndawana thize. Umama usene-Fibro iminyaka eminingi futhi unenkinga yenkumbulo manje abamhlole ngayo umgogodla. Bese ngiyazibuza ukuthi bonke abane-fibromyalgia banento efanayo. Ngiyasesaba lesi sifo.
Yebo, nginayo futhi nomama wami ona-86 unayo futhi. Kuyacasula ngezinye izikhathi, kodwa ngokuhlekisa kancane kuhamba kahle. 😉
Ingcindezi / i-oxidative stress, ukuvuvukala okungapheli kanye nekhwalithi yokulala engeyinhle kungaba nomthelela omubi ebuchosheni. Uma kuziwa ekulaleni, umuntu angalala ubusuku bonke, kodwa angabutholi ubuthongo obuhle obujulile obubalulekile ekukhumbuleni nasekugxiliseni ingqondo.
Konke lokhu kuyiqiniso. Ngiye kuma-physiotherapist amaningi futhi akekho ofuna ukwenza amamasaji angakhulula imisipha yami eqinile. Bazohlinzeka ngolwazi lokuqeqeshwa kuphela.
Sawubona. Angazi ngempela ukuthi ngiwubuze kuphi umbuzo - ngakho ngizama lapha. Usebenza enkulisa futhi ube nentamo ebuhlungu isikhathi esingangonyaka ongu-1. Kuqalwe nge-crystal disease (kusho udokotela - udokotela we-chiropractor uthe ivela entanyeni). Manje ngithathe ikhefu lokugula kusukela ekupheleni kukaJanuwari. Waya ku-chiropractor, kodwa waba nomuzwa wokuthi usize kakhulu lapho futhi ngaleso sikhathi - manje uya ku-physio. Ngike ngaya ku-MRI kanye ne-X-ray. Umphumela waba: Ukwenyuka kwe-disc degeneration kumazinga e-C5 / C6 kanye ne-C6 / C7, kwengeza ukusabela kwepuleti lekhava le-Modic 1 ngakwesobunxele kanye nokukhuphuka kancane kwe-disc flexion kanye nama-uncovertebral deposits amakhulu anikeza ama-foramen stenoses e-C6 kwesokunxele ne-C7. impande. Ayikho i-stenosis yomgogodla noma i-myelomalasia. Unezela ukuthi nginezinhlungu eziningi ekhanda lami. (Futhi-ke ikakhulukazi mayelana nokushaya kahle lapho nginyakaza futhi ngihamba). Ubekwi-physio izolo. Akazange asho okuningi ngomphumela, kodwa wathi kufanele ngelule intamo yami kancane futhi ngiqhubeke nokugijima (okuhamba kahle kakhulu). Ubuye wathi uModic ufakazelwe, kepha abacwaningi abavumelani ngokuthi basebenzise ama-antibiotics noma cha. Engizibuza kona ukuthi uModic - ngifunde kancane ngayo uma kukhulunywa ngomgogodla - ingabe kuyafana nentamo? Qaphela ukuthi abanye abantu abaseduze kwami ​​abacabangi ngempela ukuthi nginentamo ebuhlungu nokuthi mhlawumbe kufanele ngenze okwengeziwe. Nginezinsuku ezimnandi, kodwa kuthatha kancane kakhulu ngaphambi kokuba kubuhlungu futhi. Ingabe uhlobo lwe-Modic 1 luyinto engalahleka? Ngiyesaba ukuba sekhefini lokugula isikhathi eside.